Ny teôria momba ny halaviran'ny kaontinanta: toetra, fiaviana ary zavatra hita | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Ny teôria momba ny fahaterenan'ny kontinanta
Portillo Alemanina | 06/04/2021 10:02 | Nohavaozina amin'ny 07/04/2021 12:39 | Ciencia
Taloha, ireo kaontinanta dia noheverina fa nijanona nandritra ny taona an-tapitrisany. Tsy nisy na inona na inona fantatra fa ny crust an'ny Tany dia vita tamin'ny takelaka izay mihetsika noho ny onjam-pivarotan'ilay akanjo. Na izany aza, ny mpahay siansa Alfred Wegener dia nanolotra ny teôria momba ny fahaterenan'ny kontinanta. Ity teôria ity dia nilaza fa nihetsiketsika nandritra ny taona an-tapitrisany maro ireo kaontinanta ary mbola manao izany izy ireo.
Araka ny antenaina, io teôria io dia tena revolisiona ho an'ny tontolon'ny siansa sy ny jeolojia. Te hianatra ny zava-drehetra momba ny faharetan'ny kaontinanta ianao ary hahita ny tsiambaratelony?
1 Teôria momba ny fahaterenan'ny kontinanta
2 Porofo sy porofo
2.1 Fitsapana Paleomagnetika
2.2 Fitsapana biolojika
2.3 Fitsapana ara-jeolojika
2.4 Fitsapana Paleoclimatic
3 Dingana mihodinkodina kontinanta
4 Fitsinjarana zavamananaina ankehitriny
Teôria momba ny fahaterenan'ny kontinanta
Ity teôria ity dia manondro amin'ny fihetsiky ny takelaka ankehitriny izay maharitra ny kaontinanta ary izay mihetsika an-tapitrisany taona. Nandritra ny tantara ara-jeolojika an'ny Tany dia tsy nitovy toerana foana ireo kontinanta. Misy andiany porofo izay ho hitantsika any aoriana izay nanampy an'i Wegener handà ny teoria.
Ny hetsika dia vokatry ny famolavolana fitaovana vaovao hatrany amin'ny akanjo lava. Ity fitaovana ity dia noforonina tao amin'ny vatam-pasika. Amin'izany fomba izany, ny fitaovana vaovao dia manome hery ny efa misy ary mahatonga ny kaontinanta hiova.
Raha mijery akaiky ny endrik'ireo kaontinanta rehetra ianao, dia toy ny hoe natambatra i Amerika sy i Afrika. Tamin'ity no nahatsikaritra ilay filozofa Francis Bacon tamin'ny taona 1620. Na izany aza, tsy nanolotra teoria izy fa niara-nitoetra ireo kontinanta ireo taloha.
Io no notononin'i Antonio Snider, Amerikana monina any Paris. Tamin'ny taona 1858 dia navoakany ny mety hisian'ny fifindran'ireo kaontinanta.
Efa tamin'ny 1915 no namoaka ny bokiny antsoina hoe Alfred Wegener "Ny niandohan'ny kontinanta sy ny ranomasina". Tao anatin'izany no nanehoany ny teôria manontolo momba ny halaviran'ny kaontinanta. Noho izany, Wegener dia heverina ho mpanoratra ny teoria.
Nohazavainy tao amin'ny boky ny fomba nandraisan'ny planetantsika karazana supercontaine. Izany hoe, ny kaontinanta rehetra ananantsika ankehitriny dia niara-namorona iray. Io supercontient io no nantsoiny Pangea. Noho ny herin'ny tany, dia vaky i Pangea ary nifindra tsikelikely. Aorian'ny fandalinana an-tapitrisany taona, ny kaontinanta dia hibodo ny toerany ankehitriny.
Porofo sy porofo
Araka io teôria io, amin'ny ho avy, an-tapitrisany taona maro izao, dia hihaona indray ireo kaontinanta. Inona no nahatonga azy io ho zava-dehibe hanehoana an'io teôria io amin'ny porofo sy porofo.
Ny porofo voalohany nahatonga azy ireo hino azy dia ny fanazavana ny magnetisma paleo. Ny sahan'andriamby eto an-tany tsy nitovy firy hatrizay. Matetika, nivadika ny sahan'andriamby. Inona ilay andry atsimo andriamby ankehitriny no avaratra, ary ny mifamadika amin'izany. Fantatra izany satria maro ny vatam-bato avo lenta no manana fironana mankany amin'ny andriamby ankehitriny. Nahitana vatolampy andriamby izay ny tendrony avaratra dia manondro ny tendrony atsimo. Ka tamin'ny andro taloha dia tsy maintsy ho tamin'ny fomba hafa.
Ity paleomagnetism ity dia tsy azo refesina raha tsy tamin'ny taona 1950. Na dia azo atao aza ny refy, dia valiny malemy tokoa no nalaina. Na izany aza, ny famakafakana ireo fandrefesana ireo dia nahavita namaritra hoe aiza ireo kontinanta. Azonao atao ny milaza izany amin'ny fijerena ny fironana sy ny taonan'ny vatolampy. Amin'izany fomba izany dia azo aseho fa ny kontinanta rehetra dia niray hina indray mandeha.
Ny fitsapana iray hafa izay nahalasa saina ny mihoatra ny iray dia ny fanandramana biolojika. Samy karazan-javamaniry sy zavamaniry dia hita any amin'ny kaontinanta samihafa. Tsy azo eritreretina mihitsy fa ny karazana izay tsy mifindra monina dia afaka mifindra avy amin'ny kaontinanta iray mankany amin'ny iray hafa. Izay milaza fa teo amin'ny kaontinanta iray izy ireo taloha. Ny karazana dia niparitaka tamin'ny fandehan'ny fotoana, rehefa nifindra ny kaontinanta.
Ary koa, any Afrika andrefana sy atsinanan'i Amerika atsimo fananganana vatolampy amin'ny karazany sy taona mitovy aminy.
Ny fahitana iray izay nanosika ireo fitsapana ireo dia ny fahitana fôsily tamin'ilay hantsana mihintsy tany Amerika atsimo, afrika atsimo, Antarctica, india ary aostralia. Ahoana no ahafahan'ny karazan-trondro mitovy amin'ny toerana maro samihafa? Tapaka fa niara-nipetraka tao Pangea izy ireo. Hita ihany koa ny fôsily reptily Lystrosaurus any Afrika atsimo, India, ary Antarctica, ary ny fôsily Mesosaurus any Brezila sy Afrika Atsimo.
Samy manana ny faritra iombonan'ny flora sy ny biby ny zavamaniry izay nitombo arakaraka ny fandehan'ny fotoana. Rehefa lavitra loatra ny elanelan'ireo kontinanta dia nifanaraka tamin'ny toe-javatra vaovao ny karazany tsirairay.
Efa voalaza fa ny sisin'ny ny talantalana kontinanta any Afrika sy Amerika dia mifanaraka tsara. Ary izy ireo dia iray. Ho fanampin'izay, tsy izy ireo ihany no itovizan'ny endrika piozila, fa ny fitohizan'ny tandavan-tendrombohitra ny kaontinanta Amerikana atsimo sy ny afrikanina. Androany ny Oseana Atlantika dia miandraikitra ny fampisarahana ireo tandavan-tendrombohitra ireo.
Ny toetrandro koa dia nanampy tamin'ny fandikana an'io teôria io. Ny porofon'io lamina erosive io ihany dia hita tany amin'ny kaontinanta samihafa. Amin'izao fotoana izao, ny kaontinanta tsirairay dia samy manana ny fanjakan'ny rotsakorana, ny rivotra, ny mari-pana sns. Na izany aza, rehefa niforona ny kaontinanta rehetra, dia nisy ny toetr'andro nitambatra.
Ankoatr'izay, ireo tahirim-boankazo mitovy amin'izany dia hita any Afrika atsimo, Amerika atsimo, India ary aostralia.
Dingana mihodinkodina kontinanta
Ny fihoaran'ny kontinanta dia niseho nandritra ny tantaran'ny planeta. Araka ny toerana misy ny kaontinanta eran-tany, ny fiainana dia nasiana endrika na fomba hafa. Midika izany fa ny fihodinan'ny kaontinanta dia manana dingana marobe izay manamarika ny fiandohan'ny fananganana kontinanta ary, miaraka aminy, fomba fiaina vaovao. Tsaroantsika fa ny zavamananaina dia mila mizatra amin'ny tontolo iainana ary, miankina amin'ny toetr'andro, ny fivoarana dia voamariky ny toetra samy hafa.
Hodinihintsika izay dingana lehibe indrindra amin'ny halaviran'ny kaontinantaly:
Manodidina ny 1100 miliara taona lasa izay: ny fananganana ny supercontient voalohany dia nitranga teto amin'ny planeta antsoina hoe Rodinia. Mifanohitra amin'ny eritreritry ny besinimaro, tsy i Pangea no voalohany. Na izany aza, tsy azo lavina ny mety hisian'ny kaontinanta hafa teo aloha, na dia tsy ampy aza ny porofo.
Manodidina ny 600 miliara taona lasa izay: Nandany 150 tapitrisa taona teo ho eo i Rodinia ary nisy supercontient faharoa antsoina hoe Pannotia niseho. Nisy faharetana fohy kokoa, 60 taona monja.
Tokony ho 540 tapitrisa taona lasa izay, Pannotia dia nizara ho Gondwana sy Proto-Laurasia.
Manodidina ny 500 miliara taona lasa izay: Ny Proto-Laurasia dia nizara ho kaontinanta vaovao 3 antsoina hoe Laurentia, Siberia ary i Baltic. Tamin'izany fomba izany no niteraka ranomasina vaovao 2 fantatra amin'ny anarana hoe Iapetus sy Khanty.
Manodidina ny 485 miliara taona lasa izay: Nisaraka tamin'i Gondwana i Avalonia (ilay tany mifanandrify amin'i Etazonia, Nova Scotia, ary Angletera. Nifandona ny Baltic, Laurentia, ary Avalonia ka niforona an'i Euramérica.
Manodidina ny 300 miliara taona lasa izay: kontinanta lehibe 2 ihany. Amin'ny lafiny iray, manana an'i Pangea izahay. nisy 225 tapitrisa taona lasa teo izay. Pangea dia fisian'ny supercontient tokana izay niparitahan'ny zavamananaina rehetra. Raha mijery ny refy ara-jeolojika isika dia mahita fa nisy io supercontient io nandritra ny vanim-potoana Permian. Etsy ankilany, manana Siberia isika. Ireo kontinanta roa dia voahodidin'ny Ranomasin'i Panthalassa, ilay hany ranomasina nanatrika teo.
Laurasia sy Gondwana: Vokatry ny fisarahan'i Pangea dia niforona i Laurasia sy Gondwana. Nanomboka niforona koa ny Antarctica nandritra ny vanim-potoana Triassic. 200 tapitrisa taona lasa izay no nitrangan'izany ary nanomboka nisy ny fanavahana ny karazana zavamananaina.
Fitsinjarana zavamananaina ankehitriny
Na dia nisaraka aza ireo kaontinanta dia nahazo sampana vaovao tamin'ny fivoarana ny karazany, misy ireo karazam-biby mitovy toetra amin'ny kaontinanta samy hafa. Ireo fandalinana ireo dia miteraka fitoviana amin'ny karazana avy amin'ny kaontinanta hafa. Ny mahasamihafa azy ireo dia ny fivoarany rehefa nandeha ny fotoana rehefa nahita ny tenany tamin'ny toerana vaovao. Ohatra iray amin'izany ny ny sifotra zaridaina izay hita tany Amerika Avaratra sy Eurasia.
Noho ireo porofo rehetra ireo dia nanandrana niaro ny teoria i Wegener. Ireo hevitra rehetra ireo dia naharesy lahatra ny fiarahamonina siantifika. Tena nahita zavatra be dia be izy izay hamela fandrosoana siansa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Ciencia » Ny teôria momba ny fahaterenan'ny kontinanta
Tiako izany, heveriko fa tena tsara ilay teôria ary mino aho fa niray hina i Amerika sy i Afrika satria toa piozila io. 🙂